देउसिरे होइन, वाइफार्इ ! ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
देउसिरे होइन, वाइफार्इ !
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार ०७:१३
कार्तिक २० ,काठमाडौं -तिहार रङ, फूल, बत्ती र देउसीभैलोको पर्व । पहिले मादल ठोकेर, लेघ्रो तानीतानी भट्याउँदै देउसी खेल्ने चलन थियो ।
तर नयाँ प्रविधि र बदलिँदो जीवनशैलीले देउसी खेल्ने तरिका पनि फेरिएको छ । बलिराजाको अनुमति लिएर आएको जानकारी अब भट्याउनेले दिँदैनन् ।
बरु लाउडस्पिकरमा गीत घन्काउँदै आउँछन् । ढोकामा आइनपुग्दै सोध्छन्, ‘हजुर, वाइफाइको पासवर्ड के हो? ’
सहरमा त मुखले भट्याउने चलन नै हराइसक्यो । रेकर्डेड देउसीभैलो सुनाइन्छ । ‘पंक’ फेसनमा सजिएका युवायुवती भड्किला अंग्रेजी गीत बजाएर नाच्छन् । आपसमा हाँसखेल, रमाइलो र ठट्टा गर्ने बानी छुट्दै गएको छ । इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीले आत्मीयता खोसेको छ । पुस्तान्तरणसँगै चाडबाड मनाउने शैली पनि बदलिएको छ ।
यसलाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्ने संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वंग बताउँछन् । ‘समाजलाई विविध पक्षले प्रभाव पारेको हुन्छ । विज्ञानप्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासले नयाँ पुस्तालाई प्रभावित गरेको छ । त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको हो ।’, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ
मदिराले धानेकाे राजस्व कार्यालय भरतपुर …
डडेल्धुरामा बस दुर्घटना, पाँचको मृत्यु, ३४ घाइते
विडम्वना : हजुरबुबाकाे अाँखै अगाडि नातीलाई लग्यो …..
राष्ट्रपतिको उडानका लागि ४० मिनेट अन्य बिमान होल्ड
वैद्य र साना ४ कम्युनिस्ट घटक बिच कार्यगत एकताको सहमती
टोटेनह्यामको संघर्षपूर्ण जित
वाट्सनको बिष्फोटक ब्याटिङ मद्दतमा चेन्नाई फेरी शिर्ष स्थानमा